China Kudya Giredhi GFS Tank fekitori uye vagadziri | Boselan
Chikafu giredhi Girazi rakaiswa kune tangi yesimbi inoshandiswa kuchengetedza chikafu kana zvinodyiwa zvinhu zvine zvakakosha zvinodiwa. Ruvara rwe tangi runowanzo chena, uye izvo zvinodiwa zvinogona kusarudzwa zvinoenderana nesarudzo yemutengi. Zvarinoda zvakakwirira uye kusarudzwa kwezvinhu zvakasvibirira kwakanyanya kuomarara. Isu tinonyatsoteedzera iyo AWWA chiyero chekugadzira uye tinonyatso tarisa tsika. Isu tinofara kutaura newe nezve chaiwo maratidziro uye dhizaini dhizaini.
Pashure: Kaviri Membrane gasi yekuchengetedza mubati
Zvadaro: Independent tangi